Ugu yaraan hal askari oo katirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaan u dhow Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandUgu yaraan hal askari oo katirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaan u dhow Kismaayo
Ugu yaraan hal askari oo katirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaan u dhow Kismaayo
February 20, 2017 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Ugu yaraan hal askari oo katirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaan u dhow Kismaayo. [Xigashada Sawirka: Reuters]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal askari oo katirsan ciidamada maamul gooboleedka Jubbaland ayaa geeriyooday kadib markii ay la qaraxday miinada dhulka lagu aaso maanta oo Isniin ah, sida ay ilo-wareeyadu xaqiijiyeen.
Ciidamada ayaa marayay deegaanka la dhaho Yaaq-raar oo qiyaastii 30km dhanka galbeed ka xiga magaalada Kismaayo markii ay miinadu la qaraxday, sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka.
Ilaa iyo shan askari oo kale oo ku dhaawacantay miinada ayaa loo qaaday isbitaalada kuyaala Kismaayo si loogu daaweeyo.
Ciidamada Jubbaland ayaa asbuucyadii dhawaa ee la soo dhaafay howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka waday deegaanada dhinaca galbeedka Kismaayo kaga beegan, halkaas oo ay ku xooganyihiin Al-Shabaab.
Ciidamada Ciraaq oo ku sii siqaya galbeedka magaalada Mowsil si ay uga xoreeyaan maleeshiyada ISIS
Maraakiib jariif oo ajnabi ah oo yimid xeebta Boosaaso
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo saxiixay dhismaha guddiga madaxa-banaan ee xuquuqul iinsaanka Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Axad ah si rasmiya u saxiixay dhismaha lagu dhisayo guddiga madaxa-banaan ee xuquuqul aadanaha Soomaaliya. Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabada saxiixa ayaa [...]
Dhammaan lix qof oo saarnaa oo ku dhintay diyaarad qalab caafimaad siday oo ku burburday gobolka Bay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaarad siday qalab caafimaad ayaa ku burburtay degmada Bardaale ee gobolka Bay galabta oo Isniin ah, waxaana ku dhintay dhammaan lixdii qof oo saarnaa. Diyaarada ayaa ka kacday garoonka diyaaradaha Muqdisho halkaas oo [...]